Tsara kokoa ny fanginana noho ny tantara tsy ilaina. - Anony - Quote Pedia
Ny zavatra niavaka samy hafa dia nahatonga antsika tsy hitovy. Fa isika rehetra dia tokony hianatra handray andraikitra mifanaraka amin'ny toe-javatra samihafa misy heviny ny fihetsikay ary aza mamorona fiantraikany ratsy na iza na iza.
Indraindray, talanjona loatra ny fihetsikay isika, ary lasa bevohoka isika. Fa tsapantsika indraindray fa manana fihevitra matanjaka isika ary tsy maintsy maneho izany fa mieritreritra ny fiverenana foana aloha. Ireo fihetseham-po ireo dia mety tsy mihatra aminao irery fa mety hisy fiantraikany amin'ny olon-kafa.
Diniho foana ny vokatr'ireny fanovana ireny raha ampitahaina aminao izay milaza ny hevitrao. Mazava ho azy fa mitsangàna momba ny tsy mety rehetra fa mitsarà foana ny zava-misy alohan'ny handraisana andraikitra. Tsy tokony hisy fiantraikany ratsy amin'ny hafa ny fihetsikao.
Aza adino fa aleo foana mba hisorohana ny fampisehoana tantara tsy ilaina amin'ny alàlan'ny fahanginana. Mety misy fotoana sy fotoana mety kokoa mety hamahana ny raharaha. Araka izany, zava-dehibe ny ahafahantsika mitsara ilay toe-javatra ary handray andraikitra mifanaraka amin'izany.
Indraindray ny fitazonana ny fahanginana dia mitarika anao amin'ny fampisehoana tantara tsy ampoizina mety ho tsy nirianao akory. Noho izany, rehefa mahita toe-javatra iray izay tsy mitovy ny hevitra mifanipaka ary ny fomba fijerinao dia tsy hitondra fiovana lehibe eo no ho eo, dia mangina.
Ny hoe mitoetra mangina dia tsy midika hoe miala lavitra amin'ny zavatra tsy maintsy ataonao ianao. Manao hetsika mangina satria Mihetsika mafy noho ny teny ny hetsika.
Ataovy ny asa ilaina izay hisy dikany ka hisy fiantraikany lehibe sy vokatr'izany eo am-piatrehana io olana io. Izany no fomba mahomby indrindra hamahana ny toe-javatra iray ary tsy ho voatarika amin'ny resaka tsy misy dikany.
Aleo tsaratsara kokoa
Quotes Ny fiainana tsara kokoa
Quotes tsara kokoa
Aleo mivoaka mangina
Teny fohy fohy nalaza be
Teny momba ny fahendrena lehibe
Teny momba ny fampisehoana tantara tsy ilaina
Teny momba ny fihetsika mangina
Tenim-bava dia mangina sary
Teny nalaina tsy ilaina
Teny hendry sy Ohabolana
Ny fahasalamana dia tsy avy amin'ny fitsaboana foana. Ny ankamaroan'ny fotoana dia avy amin'ny fiadanan-tsaina, fandriam-pahalemana ao am-po, fiadanan'ny fanahy. Avy amin'ny fihomehezana sy ny fitiavana izany. - Anonyme
Rehefa miteny ianao fa «salama» dia tsy midika fotsiny hoe salama ara-batana. Misy…
Ankasitraho ireo izay mifosa momba anao, tsy mora amin'ny olona ny mamela ny olany ary mitondra anao amin'ny lohany. - Anonyme
Aza kivy raha misy olona mifosa momba anao. Fa kosa, tsy maintsy mahatsapa tsara ianao amin'ny…
Tsara fanahy kokoa noho ny tsapanao. - Anonyme
Zava-dehibe ny ho tsara fanahy amin'ny olona manodidina anao. Ny zava-dehibe izay ankabeazan'ny olona…
Ny fikimbana olona amin'ny fiainako dia tsy midika hoe halako izy ireo. Midika izany fa manaja ny tenako aho. - Anonyme
Ny fikimbana olona amin'ny fiainako dia tsy midika hoe halako izy ireo. Midika izany fa manaja ny tenako aho. - Anony…
Aza rerena loatra ny hihaona amin'ny olona vaovao. - Anonyme
Ny hihaona amin'ny olona iray vaovao dia tsara foana. Saika mitovy amin'ny fahalalana tontolo vaovao, psikolojia vaovao, ary…